QYBZ Dhaliilaha Taabashka Taabacsan III
Xayiraadaha duuban ee duuban waa saa'ido kala-goyn ah. Labada siddo ee gudaha iyo dibeddaba waxay leeyihiin dariiqyo dhaadheer. Noocan dhalista waxaa loo qaybiyaa hal saf, laba saf oo isku xigta iyo afar xariijimo oo duub ah oo isku xigta oo ku xiran tirada safafka rakibay. Isku xigxiga hal xariijiyeyaal duub ah ayaa qaadi kara culeyska shucaaca iyo culeyska jihada kaliya. Markay siddo culeyska shucaaca, waxay soo saari doontaa xoog qayb ka kooban, sidaas darteed dhalmo kale oo qaadi kara xoogga axial jihada ka soo horjeedka ayaa loo baahan yahay si loo dheellitiro.
QYBZ Hub Dhalinta I
Shaqada ugu weyn ee xargaha gawaarida gawaarida waa inay xambaaraan culeyska oo ay bixiyaan hagitaan sax ah oo ku saabsan wareegga xarunta gawaarida. Kaliya ma qaado culeyska foorarsiga laakiin sidoo kale wuxuu xambaaraa culeyska shucaaca. Waa qayb aad muhiim u ah.
Gawaarida gawaarida dhaqameedka ee caadiga ah waxay ka kooban yihiin laba nooc oo goos goos goos ah ama kubbado kubbado ah. Rakibaadda, saliida, shaabadaynta iyo hagaajinta nadiifinta wiishka waxaa lagu sameeyaa khadka wax soo saarka baabuurta.
Qaab-dhismeedkani wuxuu adkeynayaa in lagu soo ururiyo warshadda baabuurta, qiime sare iyo kalsooni xumo. Intaa waxaa sii dheer, marka baabuurka uu ku jiro barta dayactirka, qaadista waxay u baahan tahay in la nadiifiyo, la saliido oo la hagaajiyo.
QYBZ Dhalinta Dhaldhalaalka Caaga I
Rullaluiste duudduuban oo sita nooca noocan oo kale ah wuxuu ka kooban yahay giraan gudaha ah, giraan dibedda ah iyo walax duuban oo duuban. Joometri ahaan naqshadeeda awgeed, goosashada gawaarida duuban ayaa adkeysan kara culeysyada isku dhafan (axial iyo radial). Intaa waxaa dheer, naqshadeynta waxay u oggolaaneysaa rollers inay sii wadaan wareejinta xitaa haddii ay ku dul ordaan biraha xarkaha hoose iyo kan gudaha.
Xaglaha xiriirka ee xayeysiinta duubista ee wadada ayaa ah mid isbeddelaya, taas oo ka dhigaysa saamiga xajmiga iyo xajmiga shucaaca lagu dhejin karo xaalad kasta; marka xagalku kordho, wuxuu leeyahay awood xamuul culeys badan.
QYBZ Cajaladaha Dhaldhalaalka ee Taabacsan II
QYBZ Gooldhalinta Goobaha Spherical I
Wareegtada wareega ah ee riixista iskeelka iskudhafka isweydaarsiga waxaa loo habeeyay si ula kac ah. Sababtoo ah dusha sare ee giraanta tartanka ayaa ah mid wareegsan, waxay leedahay waxqabadka is-waafajinta. Waxay u oggolaan kartaa usheeda dhexe inuu janjeero, iyo xagasha u janjeedhada la oggol yahay waa 0,5 ° ilaa 2 ° awoodda xaddiga xaddiga xawliga ahna waa mid aad u ballaaran. Waxay sidoo kale qaadi kartaa culeyska shucaaca inta ay xambaareyso culeyska foosha. Saliida saliida guud ahaan waa la isticmaalaa.
QYBZ Hub Qaadista III
Gawaarida gawaarida waa culeys gaar ah oo lagu dhejiyo gawaarida gawaarida, oo qaada culeyska gaariga oo dhan, xoogga xawaaraha, xoogga dib u dhaca, rogista xoogga dambe, iyo gariirka iyo saameynta ay keeneen xaaladaha waddooyinka. Si loo hubiyo nabadgelyada iyo isku halaynta inta lagu gudajiro joojinta, nidaamyada ka hortagga qufulka (ABS) sidoo kale waxay noqdeen kuwa caan ah. Sidaa darteed, suuqa wuxuu leeyahay baahi sii kordheysa oo loogu talagalay cutubyada xargaha ee giraangiraha leh dareemayaal lagu dhisay. Wareegyada gawaarida waxaa loo qaybin karaa noocyada jiilka koowaad, labaad iyo saddexaad iyadoo loo eegayo horumarkooda.
QYBZ Hub Qaadista II
Gawaarida gawaarida gawaarida waa qaybo muhiim u ah gawaarida. Xadhigga xuddunta ayaa mas'uul ka ah yareynta iska caabinta khilaafaadka marka qafisku socdo iyo dayactirka wadista caadiga ah ee gaariga. Haddii xargaha xargaha goosato, waxay sababi kartaa buuq, kululaynta dhalista, iwm., Gaar ahaan giraangirta hore waa iska cadahay, waana sahlan tahay in la keeno dhacdooyin khatar ah sida kantaroolka. Sidaa darteed, xargaha xargaha waa in lagu ilaaliyaa jadwalka.
Kala duwanaanta dalabka ee goos gooska qoto dheer ee jeexdin waa mid aad u ballaaran. Waxay ku habboon yihiin xawaare sare iyo xawaare sare leh, la jaan qaada culeysyada radial iyo axial ee laba jiho, aadna ugu baahan dayactir. Meelaha qotada dheer ee jeexdin ayaa si ballaaran loo isticmaalaa noocyada dhalista. Okey saa'idka ayaa bixiya qaabab kala duwan, noocyo iyo cabbirro saa'idka kubbadda jeexdin oo qoto dheer.